श्रीमान/श्रीमतीबीच शंका गर्ने बानी छ भने यो लेख पढ्नुस् | Rajmarga
यदि तपाईकी श्रीमती वा श्रीमानले तपाईमाथि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको भए यसलाई अन्यथा ढंगले नलिनुस् । बरु तपाई आफ्नो दिनचर्यामा केही परिवर्तन ल्याउने कोशिस गर्नुस । हालै गरिएको एउटा अध्ययनले निद्राको कमीका कारण पनि मानिसमा शंका गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने गर्दछ ।
अध्ययनका अनुसार पर्याप्त निद्रा नपुगेको अवस्थामा मानिसमा शंका गर्ने प्रवृक्ति विकास हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा तपाईको पार्टनरले पनि त्यस्तो गर्न लागेका छन् भने तपाईले उनको निद्रा पूरा गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेतिर लाग्नुस् ।
महान सिब्रटिश नाटककार विलियम शेक्सपियरले चार सताब्दी पहिला नै लेखेको आफ्नो नाटक मैकबेथमा अनिद्राको सम्बन्ध आशंका र भ्रमहरुसँग रहेको उल्लेख गरेका थिए । अब वैज्ञानिकहरुले राम्रो निद्राको कमीका कारण व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो दुष्प्रभाव पर्न सक्ने ठहर गरेका छन् ।
लण्डनस्थित किंग्स कलेजले गरेको अध्ययनमा अनिद्रा र शंका गर्ने बानीबीच सिधा सम्बन्ध रहने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।यो अध्ययन जर्नल सिजोफ्रेनिया रिसर्चको नयाँ अंकमा प्रकाशित छ । प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डाक्टर डेनियल फ्रीमेनले भने–हामीलाई पहिलाबाटै थाहा छ कि एक रात निद्रा नपूग्दा हाम्रो पूरै दिन तनावग्रस्त हुने गर्दछ । निद्रा नपुगेका कारण हाम्रो विचारसमेत अस्तव्यस्त हुने गर्दछ । हामी सबैतिरबाट बेखबर हुन्छौ । दिमागमा शंका र भ्रमहरु पैदा हुनका लागि आदर्श स्थिति उत्पन्न हुने गर्दछ । नियमित र पूरा निद्रा मानसिक रुपमा स्वस्थ रहनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।
शोधकर्ताहरुले अध्ययनमा ३ सय जनालाई सहभागी गराएका थिए । उनीहरुको निद्रालाई घण्टामा विश्लेषण गरिएको थियो । फ्रीमेनका अनुसार अनिद्राको शिकार ७० प्रतिशत सहभागी शंका र भ्रमको शिकार बनेका थिए । यति मात्र होइन, अध्ययनमा सहभागी ५० प्रतिशत बढी गम्भीर रुपमा अनिद्राबाट पीडित पाइए, उनीहरुमा गहिरो असुरक्षाको भावनासमेत थियो । एजेन्सी
Previous post: यसकारण गर्नुहुँदैन एउटै गोत्रमा विवाह ! जानी राखौँ
Next post: यार्सागुम्बा टिप्न जानेहरु बर्सेनि यसरी मरिरहेका छन्
यस्तो छ यौनजीवनलाई सुखी बनाउने १० टिप्स
तपाईको सुताइले भन्छ तपाई कति सुखी
केही खाने बित्तिकै ‘गर्भवती’ हुने अचम्मको रोग
कस्तो बेला आवश्यक हुन्छ सेक्स थेरापी ? यस्ता छन् सात तथ्य
थाहा पाइराख्नुस् महिलाको पुष्ट वक्षस्थलप्रति यसकारण पुरुष आकर्षित हुन्छन्